प्रिओपन सेसनमा कतिले बढ्यो नेप्से ? - UjyaloNepal
२०७८ भाद्र ३० गते, बुधबार प्रकाशित
प्रिओपन सेसनमा कतिले बढ्यो नेप्से ?
काठमाण्डौ । बुधबार प्रि ओपनिङ्ग सेसनमा कारोबार रकम २५ लाख २ हजार ९११ रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
आजको बजारमा नेप्से ३।९४ अंकले बढेर २९३३ दशमलव २३ अंकमा पुगेको छ । कारोबारमा आएका १८ मध्ये १२ कम्पनीको मूल्य बढेको छ । चार कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने २ कम्पनीका स्थीर रहेको छ ।
यस अवधिमा १८ कम्पनीका ३ हजार ७२३ कित्ता शेयर १८७ वटा संख्यामा खरीद बिक्री भएको छ ।
कार्यकर्ता भेला सम्बोधन गर्न ओली आज बुटवल जाँदै
शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भयो उजूरी, कसुर प्रमाणित भए १० बर्ष जेल!
गतल सूचना दिएर सेयर बजारमा चलखेल, किसान लघुवित्तले नेप्सेलाई दियो यस्तो जवाफ
२०७७ चैत्र १३ गते, शुक्रबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0
अब कुन कम्पनिको आइपिओ आउँदै छ ?